टेलिकमको नाफा ५ अर्ब ४३ करोड : प्रतिसेयर आम्दानीमा गिरावट, अन्य सूचक कस्ता ? - Arthatantra.com
टेलिकमको नाफा ५ अर्ब ४३ करोड : प्रतिसेयर आम्दानीमा गिरावट, अन्य सूचक कस्ता ?
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले चालु आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को तेस्रो त्रैमासिक वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ ।
उक्त अवधिमा कम्पनीले ५ अर्ब ४३ करोड ५३ लाख ४७ हजार रुपैयाँ नाफा कमाएको छ । जुन गत आवको तेस्रो त्रैमासको तुलनमा ७.६३ प्रतिशतले कमी हो । गत वर्षको सोही अवधिमा कम्पनीले ५ अर्ब ८८ करोड ४४ लाख ७२ हजार रुपैयाँ नाफा कमाएको थियो ।
उक्त अवधिमा कम्पनीले बिक्री आम्दानी २.८० प्रतिशतले वृद्धि भई २८ अर्ब २१ करोड ९६ लाख १२ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । गत वर्षको तेस्रो त्रैमासमा कम्पनीको यो आम्दानी २७ अर्ब ४५ करोड १३ लाख ५३ हजार रुपैयाँ रहेको थियो ।
यस्तै, चालु आवको नौ महिनाको अवधिमा कम्पनीको कुल आम्दानी पनि २.७२ प्रतिशतले वृद्धि भई ३२ अर्ब ५३ करोड ६७ लाख २९ हजार रुपैयाँ पुगेको छ ।
कम्पनीको चुक्ता पुँजी १८ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । कम्पनीले जगेडा तथा कोषमा भने ७४ अर्ब ११ करोड ७७ लाख ३ हजार रुपैयाँ राखेको छ ।
उक्त अवधिमा कम्पनीको प्रतिसेयर आम्दानीमा भने गिरावट आएको छ । कम्पनीको प्रतिसेयर आम्दानी १२ रुपैयाँ ४ पैसाले घटेर ४० रुपैयाँ २६ पैसा कायम भएको छ । कम्पनीको प्रतिसेयर नेटवर्थ ५११ रुपैयाँ ७७ पैसा रहेको छ ।
वि.सं.२०७९ वैशाख २८ बुधवार ११:२५ मा प्रकाशित
News Views: 260
अघिल्लाे फेरि सस्तियो सुनचाँदीको मूल्य, आज प्रतितोला कतिमा हुँदैछ कारोबार ?
पछिल्लाे चिलिमे जलविद्युतको नाफामा झिनो सुधार: विद्युत बिक्रीबाट कमायो ८२ लाख ३४ हजार (विवरणसहित)